एड्भान्स परोलका आधारमा असाइलमको निवेदन पेश गर्न सकिन्छ ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७५-११-५ बिचार / प्रतिक्रिया
कानुन व्यबसायी ,न्युयोर्क
म सधैं विश्वसन्देश साप्ताहिक र विश्व न्युजमा प्रकाशित हुने कानूनी स्तम्भ नछुटाई पढ्ने गर्छु । नेपाली समाजलाई यसरी निशुल्क कानूनी सल्लाह दिनुभएकोमा हृदयबाट कानून व्यवसायी रमेश श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मेरो पनि जिज्ञासा भएकाले तपाईंलाई प्रश्न राखेको छु । म सन् २०१० मा नेपालबाट बी–२ भिसा लिएर आएको थिएँ । ६ महिनाको बी–२ भिसा सकिएपछि पनि अमेरिकामा बसोवास गरिरहें । मैले कुनै पनि निवेदन पेश गरेको छैन । सन् २०१५ देखि टीपीएसमा रहेको छु । ३ महिनाअघि टीपीएसको आधारमा एड्भान्स परोल डकुमेन्ट नेपाल गएर ल्याएँ । नेपालमा २ महिना मात्र रहेर अमेरिका फर्केको हुँ । मलाई अहिले असाइलमको निवेदन पेश गर्न सकिन्छ कि भन्ने जिज्ञासा जागेको छ । असाइलमको कानूनअनुसार अमेरिकामा प्रवेश गरेको दिनदेखि १ वर्षभित्रमा असाइलमको निवेदन पेश गर्नुपर्ने भएकाले म यसपाली अमेरिका प्रवेश गरेको ३ महिना मात्र भएको छ । त्यसैले के मैले असाइलमको निवेदन पेश गर्न सक्छु होला ? व्यक्ति पिच्छे विभिन्न किसिमका सल्लाह पाएकाले धेरै अन्योलमा परेको छु । सही सल्लाहको अपेक्षा राखेको छु ।
– प्रकाश, टेक्सास
प्रकाशजी, यो कानूनी स्तम्भको स्थायी पाठक हुनुभएकोमा धन्यवाद । टीपीएस स्टाटसमा रहनुभई नेपाल पनि एकचोटि भ्रमण गरेर आउनुभएको राम्रो गर्नुभयो । तर, एडभान्स परोलका आधारमा पुनः अमेरिका प्रवेश गर्नुभए पनि असाइलमको कानूनअनुसार तपाईंको ३ महिनाअघिको प्रवेशलाई नयाँ प्रवेशका रुपमा मानिँदैन । अर्थात्, तपाईं अमेरिकामा भर्खरै प्रवेश गरे तापनि एड्भान्स परोलको माध्यमबाट प्रवेश गरेकोलाई नयाँ प्रवेश वा इन्ट्रीका रुपमा मानिँदैन । त्यसैले तपाईंको सन् २०१० को प्रवेशलाई नै अमेरिकामा प्रवेश गरेको मितिका रुपमा लिइनेछ । यसको मुख्य कारण के हो भने धेरै समय वा वर्ष अमेरिकामा बसोवास गरेर टीपीएस वा अन्य स्टाटसका आधारमा एड्भान्स परोल लिएर ९० दिनभन्दा कम समय अमेरिका बाहिर बसी पुनः प्रवेश गरेको अवस्थामा सो डिपार्चर वा अमेरिका छाडी गएकोलाई वास्तविकरुपमा अमेरिकाबाट प्रस्थान गरेको मानिँदैन । त्यसैले ९० दिनभन्दा कम बाहिर रही अमेरिका पुनः प्रवेश गरे पनि पहिलेको प्रवेश गरेको मिति नै वास्तविक अमेरिकामा प्रवेश गरेको मितिका रुपमा कायम रहनेछ । तपाईं अहिले अमेरिका पुनः प्रवेश गरेको ३ महिना मात्र भए पनि असाइलमको प्रयोजनका लागि तपाईंको प्रवेश मिति सन् २०१० नै रहनेछ । त्यसैले असाइलमको १ वर्षभित्र निवेदन पेश गर्नुपर्ने नियमको पालना गर्न असम्भव हुनेछ ।